"Ninkii Ka Dambeeyay Weerarkii Misaajiddadii Christchurch Wuxuu Ahaa Aragagxiso" Booliska New Zealand Oo Argagixiso Ku Sheegay Ninkii Dadku Ku Laayay Masaajidada
22/05/2019(BNN) Ninkii lagu eedeeyay in uu 51 qof ku dilay misajiddo ku yaalla magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa lagu eedeeyay fal argagixiso ah, sidaasi waxaa sheegay booliska.
Brenton Tarrant waxa lagu soo oogay dacwad dil ah kadib weerarkii labada misaajid ee 15-kii Maarso.
Ninkaan oo u dhashay dalka Australia ayaa maxkamddiisa xigta la dhageeysan doonaa bisha June ee foodda inagu soo haysa.
Booliska oo la kulmay qoysaskii ay dhibaatada soo gaartay iyo dadkii ka badbaaday ayaa ku wergeliyay in ninkaasi lagu soo oogay fal argagixiso ka hor inta aanan lagu dhawaaqin.
Waxa ay sheegeen in ay tashi la sameeyeen khuburo dhanka sharciga ku xeel-dheer iyo dacwad oogayaasha ka hor inta aysan go'aankaasi gaarin.
Tan iyo markii ay dhaceen weeraradii 15-kii Maarso, waxaa jiratay dood adag oo ku saabsan waxa isbedeli doono oo laga faa'iidayo marka la xukumo ninkaan geeystay falkaasi arxan darrada ah.
Waxaa maxkamadda laga hor cadeeyay in ninkaan uu ku lug lahaa fal aragagiso oo aysan niyad kaliya ka ahayn.
Sidaasi darteed ayna u badantahay in dalka ay ka biloowdaan ururo ama shakhsiyaad aamisan fikradaha xagjirnimada.
Ra'iisal wasaaraha dalka New Zealand Jacinda Ardern, ayaa caalamka u dirtay baaq ku aaddan cunsurinimada, iyada oo soo jeedisay in lala dagaalammo fikirka cunsuriyadnimada ka dib weerarkii loo gaystay laba masaajid oo ku yaala Christchurch.
Mid ka mid ah waraysiyadii ay BBC-da siisay ayaa waxay ku sheegtay inay ka soo hor jeeddo fikirka ah in cunsuriyadnimada ay horseeday dadka soo galootiga ah ee dalka ku soo badanaya.
50 qof ayaa naftooda ku waayay tobonnaan kalana waa ay ku dhaawcmeen weerar Jimcihii lagu qaaday laba masaajid oo ku yaalla dalkaas.
-Ugu yaraan waxaa dalban kara sharciga hubka qof ay da'diisu tahay inta u dhaxeeysa 16 ilaa 18 sano.
-Qof walba oo hub haysta waxaa laga doonayaa warqada oggolaanshaha.
-Qofka dalbanaya dabridista waxaa la marsiinayaa baaritaan la xariira danbiyo iyo cafimaadkiisa oo lahubinayo.
- Sharcigan qofka hela waxaa loo oggol yahay iibsashada hub farobadan
balse waxaa dib loo soo cusbooneysiiyay isku day lagu doonayo in la xakameeyo adeegsiga hubka ee wadanka New-Zealand, ka dib weerarkii khasaaraha dhaliyay ee uu nin hubeysan ku qaaday masaajid lagu tukanayay.